Maxaa keenay inay soomaalidu siyaasiyiin wada noqoto? Ma rabitaan iyo jacayl siyaasadeed bay katahay mise dantaa ku kaliftay/kuqasabtay? |
Maxaa keenay inay soomaalidu siyaasiyiin wada noqoto? Ma rabitaan iyo jacayl siyaasadeed bay katahay mise dantaa ku kaliftay/kuqasabtay?
Sida lawada og’soon yahay bulshada soomaalidu (waxaan ka hadlayaa dadka somali state/DDS) siguud iyo inta waxbaratay field/culuumtay dooniba ha bartaane, waxay si joogta ah uga hadlaan ugana qayb qaataan arimaha siyaasada. Waxayna sida qaalibka ah u kala saftaan labo dhinac; (1) Dhinac/garab xukuumada markaas talada deegaanka haysa taageerta oo sax iyo khaladba kutaageera oon marnaba dhaliisheeda sheegaynin iyo (2) Dhinac mucaarad ku noqda maamulka xiligaas talada deegaanka haya una soo jeediya eedaymo badan oo ayna lahay iyo qaar ay leedahayba laakiin marnaba dhankeeda wanaasan aan sheegin.
Xukuumad kasta oo timaada labadaa garab waa qasab inaad aragto.
Hadaba su’aasha in la is waydiiyo ubaahan waxaytahay “Maxaa ku kalifa aqoonyahanka deegaanka inay labadaas garab u kala saftaan oo marba dhinac/garab noqdo/loo arko cadaw garabka kalana muwaadiniin?”
Aniga shakhsiyan markaan dhinacyo badan ka eegay qiimayna ku sameeyay waxaa ii soo baxday inay sababta ugu muhiimsani tahay “noloshii bulshada oo dhamaanteed ku xidhan-si toos ah ama si dadban- siyaasada dawlada oo ay adagtahay inaad si caadi ah oo xor ah unoolaato-ushaqaysato/u xamaalato”.
Shaqo dawladeed inaad hesho, waa inaad kamid noqoto/ahayd garabka taageeraya xukuumada markaas jirta, inaad ganacsato (intiisa badan/muhiimsan sida; qandaraasyada, leesanada soodajinta iyo dhoofinta, iskaashatooyinka la taageero, consultancy iwm) waa inaad xidhiidh dhow la leedahay xukuumada xiligaas jirta, inaad hesho fursado waxbarasho gudaha dalka iyo dibadiisaba waa inaad kamid tahay garabkii xukuumada taageeraya, – – siiwad.
Hadaba, ma xaq’baa in aqoonyahanka deegaanka lagu eedeeyo/lagu dhaliilo ama lagula yaabo inay siyaasiyiin noqdaan/iska dhigaan iyagoon xitaa soo baranin xirfadoodiina ahayn siyaasadu? Hadii aad ukuyaalo/muraayado nadiif ah oon lahay dhigri +/- sifiican ugu eegto arintan xog’ogaal na tahay, waxaan hubaa inaadan la’yaabaynin in aad aragto dhakhtar- dad ama duunyo, injineer, sharciyaqaan/gadhsoore, macalin – – iwm ka hadlaya arimo siyaasadeed.
Maxaa lax ah?
Way dhib yartahay, ee hala kala madax baneeyo oo yayna isku xidhnaanin inaad nolol hesho iyo ka mid noqoshada dawlada/maamulka markaas jira iyo daageerayaashiisa. Saraynta sharcigu hashaqayso, cadaalada halagu dhaqmo, xuquuqda muwaadin kasta hala dhowro, boosaska magacaabista haba loo eego aragtida siyaasadeed ee qofka laakiin yaan lagu apply garaynin dhamaan shaqooyinka dawlada, ganacsiga xor halaga dhigo, musuqmaasuqa hala ilaaliyo qandaraas bixinta, amaah bixinta, shati-ganacsi bixinta – – – ilaahayna halaga baqo oo hala ogaasho in eebe kaala xisaabtami doono masuuliyada aad maanta u hayso bulsha sida aad u maamushay.
Tubta toosan ilaahay ha inagu sugo, labo talana tiiroon allaah ha ina garan siiyo.
By: Shafici Dahir Muse